B.K.S. Iyengar: သင်သိရန်လိုအပ်သောအမြန်အချက် ၅ ချက် - ကျန်းမာရေး | ဇွန်လ 2022
မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ကုမ္ပဏီ, သတင်း သတင်း မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး သတင်း၊ ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်အလက် ကုန်ပစ္စည်း ဆီးဂိမ်း မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ ကုမ္ပဏီသတင်း ကျန်းမာရေး
အဓိက >> ကျန်းမာရေး >> B.K.S. Iyengar: သင်သိရန်လိုအပ်သောအမြန်အချက် ၅ ချက်
B.K.S. ၏သတင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသားများလေးလံနေသည်။ Iyengar သည်ယနေ့နံနက်အစောပိုင်းတွင်ဆုံးသွားသည်။ သူငြိမ်းချမ်းပါစေ။ pic.twitter.com/OuvtJIBtBs
- ယောဂမဟာမိတ်အဖွဲ့ (@YogaAlliance) ၂၀၁၄ ခုနှစ်သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်
ချစ်သောယောဂကျင့်စဉ် B.K.S. Iyengar သည်အသက် ၉၅ နှစ်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ Bellur Krishnamachar Sundararaja Iyengar သည်အနောက်တိုင်း၌ယောဂကျင့်စဉ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီယောဂကျင့် ၀ တ်အကြောင်းသင်သိဖို့လိုတာကဒီမှာပါ။
၁။ Bellur Krishnamachar Sundararaja Iyengar သည်ယောဂစာအုပ် ၁၄ အုပ်ရေးသားခဲ့သည်
Iyengar (သို့) ယောဂအတွက်သူ၏ပံ့ပိုးကူညီမှုအကြောင်း Lululemon ကိုနှစ်သက်သူများစွာသိသည်။ http://t.co/DDVACrvfpw ငြိမ်းချမ်းစွာအိပ်စက်နိုင်စေသော်ဝ်။ pic.twitter.com/B6yztoNuei
- Anup Kaphle (@AnupKaphle) ၂၀၁၄ ခုနှစ်သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်
အရ အေပီ Iyengar သည်ယောဂဘာသာရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ စာအုပ်စုစုပေါင်း ၁၄ အုပ်ရေးသားခဲ့သည်။ Iyengar ၏ယောဂကျွမ်းကျင်မှုသည်ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သည်။ AP သတင်းအရ Iyengar သည်အသက် ၁၅ နှစ်တွင်ယောဂကိုစတင်သင်ယူခဲ့ပြီးသူ၏အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်တွင်ပထမဆုံးယောဂသင်တန်းများစတင်သင်ကြားခဲ့သည်။
၂။ Iyengar သည်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာပြဿနာများခံစားခဲ့ရသည်
BKS Iyengar သည် ၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင်frequency.com/video/samadhi-bks-iyengar/115413923/-/5-34437352011-07-28T22: 58: 06Z
အထက်ပါဗွီဒီယိုတွင် Iyengar သည်ခက်ခဲသောယောဂကျင့်စဉ်အမျိုးမျိုးကိုသင်ကြည့်နိုင်သည်။
ဟိ နယူးယောက်တိုင်းမ် Iyengar သည်မသေဆုံးမီကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာဝေဒနာကိုခံစားခဲ့ရကြောင်းသတိပြုပါ။ Iyengar သည်ကွယ်လွန်ချိန်တွင်အသက် ၉၅ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည်။ Iyengar သည်ငယ်ရွယ်စဉ်ကတီဘီ၊ တိုက်ဖွိုက်နှင့်ငှက်ဖျားကြောင့်အားနည်းခဲ့သောသူ၏ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်စေရန်ယောဂကိုတက်ခဲ့သည်။
မျှဝေပါ Tweet အီးမေးလ်
၃။ Iyengar သည် TIME ၏သြဇာအရှိဆုံးလူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်
Live လေ့ကျင့်ခန်းတွင်ကိုယ်ဟန်အနေအထားနှင့်ချိန်ညှိရန် Iyengar ယောဂသင်ခါးနာခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ မီးယပ်သွေးဆုံးခြင်းနှင့်အခြားရောဂါဝေဒနာများခံစားနေရလျှင် Iyengar Yoga သည်သင့်အတွက်ဖြစ်နိုင်သည်။ Iyengar သည်ဟန်ချက်ညီခြင်း၊ ကိုယ်ဟန်အနေအထား (asana) နှင့်အသက်ရှူခြင်းထိန်းချုပ်မှု (pranayama) တို့ကိုအလေးပေးထားသော Hatha Yoga ၏ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ခွန်အား၊ ရွေ့လျားမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုကို asanas မှတဆင့်ရရှိသည်။ ဤအရာအတွက်သင်အထောက်အပံ့အချို့လိုအပ်လိမ့်မည်။2013-09-03T16: 50: 12Z
၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် Iyengar အားကမ္ဘာ့သြဇာအရှိဆုံးလူ ၁၀၀ တွင်တစ် ဦး အဖြစ်အမည်ပေးခဲ့သည် TIME မဂ္ဂဇင်း မရ။ သူ၏အကျော်ကြားဆုံးလက်ရာဖြစ်သော Light on Yoga ကိုဘာသာစကား ၁၈ မျိုးဖြင့်ဘာသာပြန်ပြီးပါပြီ။
မင်းသား Michael Richards Iyengar ၏ယောဂပုံစံကိုဖော်ပြခဲ့သည် ၂၀၀၄ တွင် TIME အတွက်
Iyengar သည်လေ့ကျင့်သင်ကြားသူများအားခန္ဓာကိုယ်ပေါ်၌အာရုံစူးစိုက်မှုကောင်းရန်သင်ကြားပေးသည်။ ပန်းတိုင်သည်စိတ်ကိုအသက်ရှုခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အားစိတ်ကူးတစ်ခုထဲနှင့်မချည်နှောင်ရန်ဖြစ်သည်။ သူ၏ဒဿနသည်အရှေ့တိုင်းဖြစ်သော်လည်းသူ၏အမြင်အာရုံသည်အများသဘောဖြစ်သည်။ Iyengar ကိုမင်းရဲ့ဘ ၀ နဲ့ယောဂကျင့်စဉ်ထဲကိုထည့်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးတော့ငါတို့ကအနောက်တိုင်းမြေမှာအနောက်တိုင်းသားတွေပဲ။
ကျွန်ုပ်၏သရုပ်ဆောင်မှု၊ ကျွန်ုပ်၏ယောဂကျင့်စဉ်အတိုင်း၊ ကွဲပြားမှုတိုင်း၊ အသေးစိတ်နှင့်အမူအရာတိုင်းသည်ကျွန်ုပ်၏အာရုံစိုက်မှုဖြစ်သည်။ ငါစန္ဒယားပညာရှင်တစ်ယောက်လိုအမြဲဂရုတစိုက်ဂရုပြုပြီးအဲဒီအာရုံကိုငါ့ရဲ့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုအဖြစ်ဘာသာပြန်ပေးတယ်။ Iyengar သည်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်သည်ကိုသိသည်၊ သူသည်အနောက်တိုင်း Easterner ၏အကောင်းဆုံးနှင့်ကျန်းမာမှုလမ်းကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
၄။ BKS Iygengar သည်ယောဂကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်
'Hot Yoga' Guru Settles Suit v ။ သူ၏နှစ်ပေါင်း ၅၀၀၀ လှုပ်ရှားမှုများကိုခိုးယူခဲ့သောရာထူး
၅။ Iyengar သည်များစွာသောကလေးများမှရှင်သန်ခဲ့သည်
'ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သံစဉ်၊ စိတ်ရဲ့တေးဂီတနဲ့ ၀ ိညာဉ်ရဲ့သဟဇာတဖြစ်မှုကဘဝရဲ့သံစဉ်ကိုဖန်တီးပေးပါတယ်။ '- BKS Iyengar pic.twitter.com/kkuFphd4yS
မြို့ပြယောဂ (@UrbanYogaDF) ၂၀၁၄ ခုနှစ်သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်
အရ ဝါရှင်တန်ပို့စ် Iyengar သည်သူ၏ဇနီး Ramamani Iyengar နှင့် ၁၉၄၃ တွင်လက်ထပ်ခဲ့သောသားငါးယောက်နှင့်သားတစ်ယောက်ရှိသည်။
ဝမ်းနည်းစရာကောင်းသည်မှာသူ၏ဇနီးသည်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များစွာကသေဆုံးခဲ့သည်။ ရာမာနီသည် ၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည် အင်တာဗျူး Iyengar သည်သူ၏ဇနီးကိုကျွန်ုပ်၏လက်တွဲဖော်၊ ကျွန်ုပ်၏လမ်းညွှန်၊ ကျွန်ုပ်၏တွေးခေါ်ပညာရှင်ဖြစ်သည်။ သူသည်သူ၏ယောဂကျင့်စဉ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာအကြံပေးနိုင်ရန်သူ၏ဇနီးကိုယောဂလေ့ကျင့်ပေးခဲ့သည်ဟုလည်းပြောကြားခဲ့သည်။
iPhone အတွက်အကောင်းဆုံးစက်ဘီးအသုံးအဆောင်များ ၅